ကို http://ဤ website မှ www.knwautobody.com ကြိုဆိုရဲ့ links တွေကို [ဒီ link မူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီဖန်ဆင်း].
[ဤ website မှဆက်သွယ်ထားသောသောအခါဤဆက်သွယ်ထားသောမူဝါဒအသငျသညျအကူအညီပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။] OR [ဤ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤဆက်သွယ်ထားသောမူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။]
ကို http မှ Links များ://www.knwautobody.com
ကို http မှညွှန်ပြ Links များ://www.knwautobody.com မှားယွင်းစွာရေးသားမဖြစ်သင့်ပါဘူး.
သင့်လျော်သော link ကိုစာသားအစဉ်အမြဲသုံးပါတယ်လိမ့်ရပါမည်.
[အခြိနျမှနျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ၏ URL ကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာ update နိုင်ပါသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်မဟုတ်ရင်အရေးအသားအတွက်သဘောတူသည်မဟုတ်လျှင်, သငျသညျကပြောပါတယ်လင့်များကို update တာဝန်ရှိသည်။] သင်သည်ဤ website ကိုလင့်ထားသောငါတို့၏လိုဂိုကိုမသုံးရပါမည် (သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ.
သင်သည်ဤ website ၏ content တွေကိုဘောင်သို့မဟုတ်ဤ website ၏အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်. ဆိုအလားတူနည်းပညာကိုအသုံးပြုရပါမည်မဟုတ်.
ဤ website ကနေ Links များ
ဒီ website တတိယပါတီကပိုင်ဆိုင်နှင့် operated အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ links တွေကိုလည်းပါဝင်သည်. အဲဒီ links ထောက်ခံစာသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များမဟုတ်.
ကို http://www.knwautobody.com တတိယပါတီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာရဲ့ contents မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးရှိပါတယ်, နှင့်ကို http://www.knwautobody.com ထိုသူတို့အဘို့သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိပါတယ်လက်ခံ.
သငျသညျသဘောတူ, ကျနော်တို့ကို http ဖို့ link တစ်ခု၏ deletion 'ကိုတောင်းဆိုသင့်ပါတယ်://သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအထဲမှာ www.knwautobody.com, သငျသညျခကျြခငျြး link ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိမ့်မယ်.
သငျသညျကို http အပေါ်ထည့်သွင်းကြောင်းသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ link တစ်ခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလျှင်://www.knwautobody.com, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုတဲ့ egal ခွင့်ရှိသည် မှလွဲ. သတိပြုပါ, ထိုကဲ့သို့သောဖယ်ရှားရေးကျနော်တို့ရဲ့သမ္မာသတိမှာဖြစ်လိမ့်မည်။]
ဒီ link မူဝါဒအပြောင်းအလဲများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပေါ်တစ်ဦးဗားရှင်းသစ်ထုတ်ဝြေခင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်မှာဒီ link ရေးမူဝါဒပြင်ဆင်ရန်အကြောင်း,
သင်သည်ဤဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းတွေကရှိထားသင့်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထွက် set အသေးစိတ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: